JW Library: Hanova ny Endrik’izay Vakinao: (Android) | JW.ORG Fanampiana
Azonao tsindriana ilay teboka telo eo amin’ny farany ambony ankavanana, dia hiseho ny zavatra hafa azo atao.
Tsindrio ilay hoe Langues mba hahitanao ny fiteny rehetra misy amin’ilay zavatra vakinao. Izay fiteny ampiasainao matetika no miseho voalohany eo amin’ilay lisitra. Azonao soratana fotsiny koa ny anaran’ilay fiteny tianao hotadiavina.
Tsindrio ilay hoe Taille de police. Azonao akisakisaka ilay izy, dia ho lasa kely na lehibe ny soratra. Hitovy amin’izay haben’ny soratra fidinao eo ny haben’ny soratra amin’ny zavatra rehetra vakinao ao amin’ny JW Library.
Mety ho hita amin’ny endrika sary na soratra ny lahatsoratra sasany. Tsindrio ilay sary kely mifanitsy amin’izany, raha tianao ny hifidy ny iray amin’ireo endrika ireo.
Ho afaka hijery an’izay vakinao ao amin’ny JW Library any amin’ny programa hafa ianao, rehefa tsindrianao ilay hoe Ouvrir dans...
Tsindrio ny hoe Ouvrir dans..., dia hiseho ny lisitr’ireo programa hafa azonao ampiasaina. Azonao tsindriana, ohatra, ilay hoe Ouvrir dans Bibliothèque en ligne, dia hisokatra ao amin’ny FITEHIRIZAM-BOKIN’NY Vavolombelon’i Jehovah ao amin’ny Internet ilay pejy vakinao.
Tsindrio ny andinin-teny ao amin’izay vakinao, dia hiseho ireo andinin-teny. Tsindrio ilay hoe Personnaliser, eo ambanin’ireo andinin-teny, mba hifidianana an’izay Baiboly efa nadikanao ka tianao hampidirina ao anatin’ilay lisitra.
Tsindrio ny hoe Ajouter na Retirer, raha te hanampy na hanala Baiboly ianao. Akisaho miakatra na midina ireo Baiboly, raha tianao halahatra araka izay tianao.
Jereo ilay hoe “Azo Atao ny Mampiditra Baiboly Isan-karazany: Android” raha mila fanampiana momba ny fampidirana Baiboly hafa ao amin’ny JW Library ianao.